करोडमा बिक्यो हनुमन्ते खोला, कहाँ चुके मेयर श्रेष्ठ « News of Nepal
एउटा खोलाको मूल्य कति हुन्छ ? हजार, लाख कि करोड । खोला त सार्वजनिक हो, यसको कुनै मूल्य हुदैन, यो किनबेच पनि हुदैन, यो नियम र कानूनका कुरा होलान् । तर सहमति बन्यो भने खोला करोडौं मूल्यमा बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा यतिखेर भक्तपुरमा निकै चर्चाको विषय बनेको छ । भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिका र तत्कालिन बालकोट गाविस हुँदादेखि नै हनुमन्ते खोला फर्काउने चलखेल निकै पटक बन्यो ।
भूमाफियाले पैसा र पावरको आडमा प्रहरी, प्रशासन र माथिल्लो निकायसम्मलाई प्रभावमा पार्दै पटक–पटक हनुमन्ते खोला फर्काउने दुस्प्रयास गरिरहे । तत्कालिन समयमै करोडौंको खेल चलिरहयो । हनुमन्ते खोला बिक्ने र बिकाउने खेल चलिरहदाँ मध्यपुरथिमिका बासिन्दा यसको घोर बिरोधमा उत्रिरहे । बालकोट गाविस हुदाँ सिमा विवाद कै कारण फर्काउन नसकेको हनुमन्ते खोला तत्कालिन अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिका हुदा पनि फर्काउने खेल चलिनै रहयो ।
ठिमीका एक बासिन्दाले भने, ‘हामीले मेयरलाई साथ दिएर खोला फकाउन नदिन उसैको पछि लागेर ज्यान धरापमा राखेर उत्रियौ, अहिले जनताले थाहै नपाई कसरी बन्यो सहमति यो जवाफ मेयरले दिनुपर्छ । खोला बिक्यो भन्छन् बास्तविक के हो जनता जान्न चाहन्छन् । खोलाको सिमाना अब कहाँ हुने हो, मध्यपुर नगरपालिका कहाँसम्म पुग्ने हो ? हाम्रो खोला र त्यहाँको सार्वजनिक जग्गा जिवित रहन्छ कि त्यो पनि करोडौको खेलमा सति जान्छ ? यो जवाफ अब दिनु पर्दैन ?’
गृहकार्य नपुगेकाे भन्दै नेकपाकाे बैठक अन्याेलमा,